OST PST Converter ရန်။ ပြောင်းပါ OST PST သို့
အဘယ်ကြောင့် DataNumen Exchange Recovery?
ပြန်လည်နာလန်ထူမှုနှုန်းသည်မီတာဖြစ်သည်ost တစ် ဦး ၏အရေးကြီးသောစံ OST ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့် OST PST ပြောင်းလဲခြင်းထုတ်ကုန်ရန်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပြည့်စုံသောစစ်ဆေးမှုများအပေါ် အခြေခံ၍ DataNumen Exchange Recovery အကောင်းဆုံးပြန်လည်နာလန်ထူမှုနှုန်းရှိပါတယ်စျေးကွက်ရှိအခြားပြိုင်ဖက်များထက်များစွာပိုကောင်းသည်။
ဘယ်လိုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ DataNumen Exchange Recovery ယှဉ်ပြိုင်ဆေးလိပ်သောက်
ငါ l ကိုစဉ်းစားပြီးပြီဖြစ်သောအီးမေးလ်အကွက်ကိုပြန်လည်ဆယ်တင်နိုင်သည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ostDataNume Exchange Recovery နှင့်အတူ
ဒီအစီအစဉ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါကြီးတစ်ခုအောင်မြင်စွာပြောင်းလဲပစ်ရန်ကအသုံးပြုခဲ့သည် OST ငါ့ကို recover လုပ်ဖို့ခွင့်ပြုထားတဲ့ဖိုင်
စကားမစပ်, သင့်ရဲ့အများကြီးကိုတန်ဖိုးထားတယ်။ ကျနော်တို့ဝယ်၏ဆုံးဖြတ်ချက်ချ၏ Datanumen Exchange Recovery မနေ့ကကိရိယာတစ်ခုနဲ့ငါတို့အခြေပြုခဲ့တာတစ်ခု
သင်အလွန်တန်ဖိုးထားကြသည်! ယခုငါပြက္ခဒိန်အချက်အလက်ကိုမမှန်ကန်သောတည်ဆောက်မှုမှရနိုင်သည် OST (ရှိသင့်သည်
ဒါကဆော့ဖ်ဝဲကြီးတစ်ခုပဲ။ ကျိုးသွားတယ် OST file ကိုပထမဆုံးအကြိမ် file လုပ်ပြီး Outlook 2019. မှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖွင့်လိုက်တယ်။ ငါ ၃ ခုကြိုးစားခဲ့တယ်
CIO ဟောင်း, ယခုအငြိမ်းစားယူ
ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကွန်ပျူတာကိုပြန်လည်အစားထိုးပြီးနောက်ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ်ပိုင်အသုံးပြုမှုအတွက်၎င်းကို PST သို့ပြောင်းလဲသည့် UST ဖိုင်ဟောင်းကိုပြန်လည်ရယူရန်လိုအပ်သည်။ ဆော့ဗ်ဝဲတွေအများကြီးထဲမှာငါရှိတယ်
မတ်လ 7, 2020
၁၀ နာရီကျော်ကြာသောအချိန်တွင် MS ကို Outlook 10 ကို ၂၀၁၃ အထိတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် autogeneration ကိုတိုးမြှင့်သောအခါပြသနာသည်မည်သို့ရှိကြောင်း MS အားပညာပေးရန်အချိန်ဖြုန်းခဲ့သည်။
San Diego မှ, CA, USA
မေလ 15th, 2015
လဲလှယ်အတွက်ဘုံအမှားများနှင့်ပြFollowingနာများကိုအောက်ပါများအတွက်ဖြေရှင်းချက် OST ဖိုင်မှတ်တမ်း
အဆမတန်ကြီးမား OST ပြProbleနာဖိုင်
အဓိကအင်္ဂါရပ်များ DataNumen Exchange Recovery v8.6
Support 5.0 2019 မှ XNUMX အထိထောက်ပံ့နိုင်သည်။
Outlook 97 မှ 2019 နှင့် Office 365 အတွက် Outlook ကိုထောက်ပံ့ပါ။
ထောက်ပံ့ OST Exchange ActiveSync အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးဖိုင်များ။
မေးလ်မက်ဆေ့ခ်ျများ၊ ဖိုင်တွဲများ၊ postS, ပြက္ခဒိန်များ, ရက်ချိန်း, အစည်းအဝေးတောင်းဆိုမှုများ, အဆက်အသွယ်များ, ဖြန့်ဖြူးစာရင်း, အလုပ်များကို, အလုပ်တောင်းဆိုမှုများ, ဂျာနယ်များနှင့်မှတ်စုများ OST ဖိုင်များ။ ဥပမာ - ဘာသာရပ်၊ to၊ from, cc, bcc, date, စသည့်ဂုဏ်သတ္တိများအားလုံးကိုပြန်လည်ရရှိသည်။
ထည့်သွင်းထားသောအရာဝတ္ထုများ၊ အခြားမက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခုဖြစ်သည့် Excel Worksheets၊ Word documents နှင့်အခြားအရာများကိုပြန်လည်ရယူရန်ပံ့ပိုးမှု
ပြန်လည်ရယူထားသောပစ္စည်းများသည်သိမ်းဆည်းပြီးမိုက်ကရိုဆော့ဖ် Outlook နှင့်အခြားသဟဇာတဖြစ်သောမေးလ်သုံးစွဲသူများမှအလွယ်တကူကြည့်ရှုနိုင်သည့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဖိုင်တွဲများ (PST) ဖိုင်များအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားသည်။
မေးလ်မက်ဆေ့ခ်ျများ၊ ဖိုလ်ဒါများ၊ စ။ အပါအဝင် Exchange mailbox တွင်ဖျက်ထားသည့်ပစ္စည်းများကိုပြန်လည်ရယူရန်ပံ့ပိုးမှုosts, ပြက္ခဒိန်များ, ရက်ချိန်း, အစည်းအဝေးတောင်းဆိုမှုများ, အဆက်အသွယ်, ဖြန့်ဖြူးစာရင်း, အလုပ်များ, အလုပ်တောင်းဆိုမှုများ, ဂျာနယ်များနှင့်မှတ်စုများ။
ပြောင်းလဲရန်ပံ့ပိုးမှု OST PST ဖိုင်များကိုမြန်ဆန်စွာထိထိရောက်ရောက်လုပ်ခြင်း။
ကြီးကြီးမားမား 2GB ပြန်လည်ရယူရန်ပံ့ပိုးမှု OST ဖိုင်များကို။
ပြန်လည်ရယူရန်ပံ့ပိုးမှု OST 16777216 TB (ဆိုလိုသည်မှာ 17179869184 GB) ကဲ့သို့ကြီးမားသောဖိုင်များ။
စကားဝှက်ကိုကာကွယ်ရန်အတွက်ပံ့ပိုးမှု OST compressible encryption နှင့်မြင့်မားသော encryption (သို့မဟုတ်အကောင်းဆုံး encryption) နှစ်ခုလုံးကိုထောက်ပံ့သည်။ The OST သင့်မှာစကားဝှက်မရှိဘူးဆိုရင်တောင်ဖိုင်ကိုပြန်လည်ရယူနိုင်တယ်။
ပုံသေ PST ဖိုင်ကို Outlook 97-2002 format၊ Outlook 2003-2019 format နှင့် Office 365 format အတွက်ထုတ်လုပ်ရန်ပံ့ပိုးသည်။
ပြန်လည်ရယူရန်ပံ့ပိုးမှု OST ပျက်စီးနေသောသို့မဟုတ်ပျက်စီးနေသော VMWare VMDK (Virtual Machine Disk) ဖိုင်များ (* ။ vmdk)၊ Virtual PC VHD (Virtual Hard Disk) ဖိုင်များ (* ။ vhd)၊ Acronis True Image ဖိုင်များ (* ။ tib)၊ Norton Gh မှဖိုင်အချက်အလက်များကို။ost ဖိုင်များ (* ။ gho, * .v2i)၊ Windows NTBackup ဖိုင်များ (* ။bkf), ISO image ဖိုင်များ (* ။ iso), disk image file (* ။ img), CD / DVD image files (* ။ bin), အရက် 120% Mirror Disk File (MDF) ဖိုင်များ (* ။ mdf) နှင့် Nero image files (* .nrg) ။
ပြုပြင်နှင့်ပြောင်းလဲမှပံ့ပိုးမှု OST floppy disk များကဲ့သို့ပျက်စီးနေသောမီဒီယာပေါ်တွင်ဖိုင်များ၊ Zip disk များ၊ CDROM များစသဖြင့်
အသုတ်ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ပြောင်းလဲခြင်းမှပံ့ပိုးမှု OST ဖိုင်များကို။
ရှာဖွေရန်နှင့်ရွေးရန်ပံ့ပိုးမှု OST ဖိုင်များကို client ကွန်ပျူတာတွင်ပြန်လည်ပြုပြင်ရန်။
Windows Explorer နှင့်ပေါင်းစည်းမှုကိုထောက်ပံ့ပါ၊ ထို့ကြောင့်သင်ပြန်လည်ပြင်ဆင်နိုင်သည် OST အလွယ်တကူ Windows Explorer ၏ context menu ကိုအတူဖိုင်။
အသုံးပြုခြင်း DataNumen Exchange Recovery ပြောင်းရန် OST PST ဖိုင်များသို့
Microsoft Exchange server တွင်ဆာဗာချို့ယွင်းမှုများ၊ ဆာဗာဒေတာဘေ့စ်ပျက်စီးခြင်းစသည့်ပြdisasterနာများဖြစ်ပွားသောအခါအော့ဖ်လိုင်းအော့ဖ်လိုင်းဖိုင်တွဲ (။ostclient ကွန်ပျူတာရှိဖိုင်များသည်သင်၏မေးလ်မက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်သင်၏ Exchange မေးလ်အကောင့်၏အခြားအရာများပါနေဆဲဖြစ်သည်။ သင်အသုံးပြုနိုင်သည် DataNumen Exchange Recovery ပြောင်းလဲရန် OST ဖိုင်များအတွင်းရှိဒေတာများကို Microsoft Outlook တွင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ရန် PST ဖိုင်များသို့ဖိုင်များ။
ထို့အပြင်သင်နှင့်အတူအမျိုးမျိုးသောအမှားအယွင်းများနှင့်ပြproblemsနာများကြုံတွေ့ရသည့်အခါ OST အချက်အလက်အဂတိလိုက်စားမှု၊ ထပ်တူပြုခြင်းအမှားများ၊ အီးမေးလ်များကိုမှားယွင်းစွာဖျက်မိခြင်း၊ OST ဖိုင်ပြproblemနာစသည်ဖြင့်သင်အမြဲတမ်းအသုံးပြုနိုင်သည် DataNumen Exchange Recovery ကနေဒေတာတွေကို recover ရန် OST ဖိုင်များနှင့် PST format နဲ့သူတို့ကိုပြောင်း။
မှတ်စု: ပြောင်းလဲခြင်းမပြုမီ OST ဖိုင်တွဲ DataNumen Exchange Recoveryကျေးဇူးပြု၍ ၎င်းကိုရယူရန်သို့မဟုတ်ပြုပြင်ရန်အခြား application များကိုပိတ်ပါ OST ဖိုင်။ Microsoft Outlook ကိုလည်းပိတ်ပါ။
ယင်းကို Select လုပ်ပါ OST ကူးပြောင်းရမည့်ဖိုင်
သင်ထည့်နိုင်သည် OST ဖိုင်အမည်ကိုတိုက်ရိုက်သို့မဟုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ
ရှာရန် button ကို OST ကွန်ပျူတာထဲမှာကူးပြောင်းမဲ့ဖိုင်တဖိုင်။
သင်အရင်းအမြစ်၏ Outlook ဗားရှင်းကိုသိလျှင် OST ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန်ဖိုင်ကိုပြီးရင်၎င်းကို combo box တွင်သတ်မှတ်နိုင်သည်
source file edit box ဘေးတွင် Outlook 97-2002, Outlook 2003-2010 နှင့် Outlook 2013-2019 / Office 365. အမျိုးအစားများဖြစ်နိုင်ချေရှိသည်။ သင်ပုံစံကို "Auto Determined" အဖြစ်ထားခဲ့လျှင်၊ DataNumen Exchange Recovery အရင်းအမြစ်ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးပါလိမ့်မယ် OST ဖိုင်ကိုအလိုအလျှောက်ဆုံးဖြတ်ရန်ဖိုင်။ သို့သော်ဤသည်အပိုဆောင်းအချိန်ယူပါလိမ့်မယ်။
DataNumen Exchange Recovery သင်ပြောင်းလဲပြီးသောအရာဝတ္ထုများကိုဖွင့ ်၍ ကြည့်ရှုရန် Microsoft Outlook ကိုသုံးရန်အတွက် Outlook PST format ဖြင့်ပြောင်းလဲထားသောအချက်အလက်များကိုဖိုင်အသစ်တစ်ခုအဖြစ်သိမ်းဆည်းလိမ့်မည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ပုံမှန်အားဖြင့်ဖိုင်အမည်အသစ်သည် xxxx_recovered.pst ဖြစ်ပြီး xxxx သည်ရင်းမြစ်၏အမည်ဖြစ်သည် OST ဖိုင်။ ဥပမာအားဖြင့်, အရင်းအမြစ်အဘို့ OST ဖိုင်ရင်းမြစ်။ostပုံသေကူးပြောင်းလိုက်သောဖိုင်သည် Source_recovered.pst ဖြစ်သည်။ အခြားအမည်တစ်ခုကိုအသုံးပြုလိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ ရွေးချယ်ပါသို့မဟုတ်ပြင်ဆင်ပါ။
သင်ပြောင်းလဲထားသော PST ဖိုင်အမျိုးအစားကို combo box တွင်ရွေးချယ်နိုင်သည်
ကူးယူထားသောဖိုင် edit box ဘေးတွင်၊ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောပုံစံများမှာ Outlook 97-2002 နှင့် Outlook 2003-2019 / Office 365. ပုံစံကို "Auto Determined" အဖြစ်ထားခဲ့လျှင်၊ DataNumen Exchange Recovery local computer ပေါ်တွင် install လုပ်ထားသော Outlook နှင့်လိုက်ဖက်သော convert PST ဖိုင်ကိုထုတ်ပေးလိမ့်မည်။
ခလုတ်နှင့် DataNumen Exchange Recovery အလိုလိုtart ကိုအရင်းအမြစ်မှပြောင်းလဲ OST PST ဖိုင်ကိုဖိုင်။ တိုးတက်မှုဘား
ယခုတွင်သင်သည် PST ဖိုင်ကို Microsoft Outlook ဖြင့်ဖွင့်ပြီးပြောင်းလဲထားသောအရာဝတ္ထုများကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ ကျေးဇူးပြုပြီးမှတ်သားထားပါ DataNumen Exchange Recovery ပြောင်းလဲထားသောအရာဝတ္ထုများကိုသူတို့၏မူလဖိုင်တွဲများ၌ထားရန်ကြိုးစားလိမ့်မည်။ သို့သော်ဌအဘို့ost ရှာဖွေတွေ့ရှိသောအရာဝတ္ထုများကိုပြန်လည်ကောင်းမွန်စေပြီးပြန်လည်သိမ်းဆည်းထားသည့်အုပ်စုများ၊ ပြန်လည်သိမ်းဆည်းထားသည့်အုပ်စု၊
DataNumen Exchange Recovery ၃.၂ ကိုဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက်၊ ၂၀၂၀ တွင်ထုတ်ပြန်သည်
DataNumen Exchange Recovery ၃.၁ ကို ၂၀၂၀၊ အောက်တိုဘာ ၃၁ ရက်တွင်ထုတ်ပြန်သည်
DataNumen Exchange Recovery 7.5 ကို ၂၀၀၃ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၅ ရက်နေ့တွင်ထုတ်ပြန်သည်
DataNumen Exchange Recovery 7.2 ကိုဇွန်လ 21, 2020 တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
DataNumen Exchange Recovery ၁.၂ ကိုဖေဖော်ဝါရီ ၁၀ ရက် ၂၀၀၄ တွင်ထုတ်ပြန်သည်
DataNumen Exchange Recovery 6.8 ကိုဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်၊
DataNumen Exchange Recovery 6.5 ကိုဇန်နဝါရီလ ၂၁ ရက် ၂၀၁၉ တွင်ထုတ်ပြန်သည်
Exchange Server 2019 နှင့် Outlook 2019 တို့ကိုထောက်ပံ့ပါ။
DataNumen Exchange Recovery ၁.၁ ကိုနို ၀ င်ဘာ ၅ ရက်၊ ၂၀၀၃ တွင်ထုတ်ပြန်သည်
DataNumen Exchange Recovery ၃.၂ စက်တင်ဘာ ၉ ရက်၊
DataNumen Exchange Recovery 5.5 ကိုAprilပြီလ 28, 2018 တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
Support Server 2016, Outlook 2016 နှင့် Office 365 တို့ကိုထောက်ပံ့ပါ။
DataNumen Exchange Recovery 5.0 ကိုဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်၊
“ ပစ္စည်းများကိုရွှေ့။ မရပါ” အမှားကိုပြုပြင်ရန်ပံ့ပိုးမှု OST ဖိုင်များကို။
DataNumen Exchange Recovery 4.5 ကိုဇွန်လ 12, 2014 တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
Outlook 2013 ကိုပြန်လည်ရယူရန်ပံ့ပိုးမှု OST ဖိုင်များကို။
DataNumen Exchange Recovery ၁.၆ ကိုAprilပြီ ၁ ရက် ၂၀၁၀ တွင်ထုတ်ပြန်သည်
ပြန်လည်ရယူရန်ပံ့ပိုးမှု OST ပျက်စီးနေသောသို့မဟုတ်ပျက်စီးနေသော VMWare VMDK (Virtual Machine Disk) ဖိုင်များ (* .vmdk)၊ Virtual PC VHD (Virtual Hard Disk) ဖိုင်များ (* .vhd)၊ Acronis True Image ဖိုင်များ (* .tib) မှ Norton Gh မှဖိုင်ဒေတာost ဖိုင်များ (* .gho, * .v2i)၊ Windows NTBackup ဖိုင်များ (* ။bkf), ISO image files (* .iso), Disk image file (* .img), CD / DVD image files (* .bin), Alcohol 120% Mirror Disk File (MDF) ဖိုင်များ (* .mdf) နှင့် Nero image files (* .nrg) ။
DataNumen Exchange Recovery ၂.၀ ကို ၂ ဝဝ ၉ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ ၂၉ ရက်တွင်ထုတ်ပြန်သည်
DataNumen Exchange Recovery ၂.၀ ကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့တွင်ထုတ်ပြန်သည်
Microsoft Outlook 2007 နှင့် Exchange 2007 ကိုထောက်ပံ့ပါ။
DataNumen Exchange Recovery ၁.၂ ကိုနို ၀ င်ဘာ ၁၉ ရက်၊ ၂၀၀၆ တွင်ထုတ်ပြန်သည်
DataNumen Exchange Recovery 1.0 ကိုဇန်နဝါရီလ 1, 2006 တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
မိဘမဲ့ကလေးသို့မဟုတ်အကျင့်ပျက်ခြစားမှု Microsoft Exchange offline သိုလှောင်မှုကိုပြန်လည်ရယူရန်အစွမ်းထက်သောကိရိယာတစ်ခု (။ost) ဖိုင်တွေ